ငါဘယ်လို WINDOWS 8 ကို RESET ပါဘူး - WINDOWS ကို - 2019
ဒါဟာစနစ် reboot လုပ်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူးကြောင်းထင်ရပေသည်။ သို့သော်ကြောင့် 8 အသစ်တစ်ခုကို interface ရှိပါတယ် windose ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ - မီထရို - လူအတော်များများသုံးစွဲသူများဤဖြစ်စဉ်ကိုမေးခွန်းထုတ်။ အားလုံးပြီးနောက်, menu ပေါ်တွင်ပုံမှန်အရပျ၌ "Start" button ကိုအဘယ်သူမျှမပယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ငါတို့သည်သင်တို့ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
ငါဘယ်လို 8 system ကို windose reset ပါဘူး
ဒီ operating system ကိုခုနှစ်တွင်ပါဝါခလုတ်များစွာကိုအသုံးပြုသူများသည်အခက်အခဲသို့ဤခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးဆောင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, ကောင်းစွာဝှက်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်စေချင်တယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်က Windows 8 အသစ်သည်မှန်လျှင်, ကအချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျအချိန်ကုန်သက်သာစေရန်ကျနော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုးစနစ်ပြန်လည်စတင်ရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: panel ကို« Charm »အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါ PC ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးသိသာလမ်း - အသုံးပြုမှုခြမ်းအံ့ဖွယ်ခလုတ် (panel ကိုရှိသတဲ့ « Charm") ။ ခလုတျကှကျကနေတဆင့်ခေါ် ဦးဝင်း + I ကို။ ညာဘက် panel ကိုနာမတျောနှငျ့ပုံပေါ် "Options ကို"သငျသညျဖြစ်ကြပြီးပါဝါခလုတ်ကိုရှာတွေ့အဘယ်မှာရှိ။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ - တစ်ဦးကို item ဆံ့မည်သည့်တစ်ဦး Context Menu ကရှိပါလိမ့်မည် - "Reset".
Method ကို 2: Shortcuts
သငျသညျကိုလည်းလူသိများပေါင်းစပ်သုံးနိုငျ Alt + F4။ သင် Desktop ပေါ်မှာကဤခလုတ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလျှင်, PC ကိုမီနူးကို turn off ပါလိမ့်မယ်။ ကို Select လုပ်ပါ "Reset" drop-down menu နဲ့ကလစ် "အိုကေ".
Method ကို 3: Menu ကို Win + X ကို
အခြားသောနည်းလမ်း - သင်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်များအတွက်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံး tools တွေကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်သည့်မှတဆင့် menu ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်သော့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်စေ Win + X ကို။ ဒီနေရာတွင်တစ်နေရာတည်းတွင် tools တွေအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနှင့်တစ်ဦးကို item ကိုတွေ့လိမ့်မည် "ဆင်း Shut သို့မဟုတ်ပိတ် log"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ pop-up menu ကို, အလိုရှိသောအရေးယူရွေးချယ်ပါ။
Method ကို 4: ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးနောက်
မရအပူဆုံးနည်းလမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သော့ခတ်မြင်ကွင်းတွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုခလုတ်ကိုရှာဖွေကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ရုံတပ်မက်လိုချင်သောအ action ကို select လုပ်ပါ, pop-up menu ကို၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင်စနစ်ပြန်လည်စတင်ရန်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအနည်းဆုံး4နည်းလမ်းတွေကိုသိသော။ အဆိုပါနည်းလမ်းများအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်, သင်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများမှာသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးကိုထံမှအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူဆဲအနည်းငယ်သည် Metro UI ကို interface ကိုနားလည်သဘောပေါက်မျှော်လင့်ပါတယ်။